Qurbo Joogta Somalida Ogadeeniya oo Fayl ugu Jira Xeryaha Booliska dalalka Ingriiska iyo Sweden – Rasaasa News
Aug 16, 2009 Kilil5
Waxaa si aad ah isugu taxalujinaya dadweynaha qurbo joogta ah ee Somalida Ogadeeniya sidii ay waftiga ugala hadhi lahaayeen Cabdi Maxamed Cumar [Iley], oo ay dadweynuhu ku sifeeyeen in uu yahay dambiile weyn oo kow ka ah gumaadkii ka dhacay Ogadeeniya [the Ogaden genocide 2007/08] sanadihii 2007/08.
Iley oo ay hore dacwooyin uga yaaleen maxkamada caalamiga ah [the Hague court], ayaad moodaa in ay Itobiya ku tala gashay in ay ku kiis baxdo, tacadiyada ay u haysataan Hayadda xuquuqda dadka. Iley oo la qariyey kolkii hore, in uu ka mid yahay waftiga imanaya dalalka reer galbeedka, ayey dad soo dhawaynayey waftiga ku dhex arkeen dabadeedna waxay wargaliyeen dadweyne badan oo qurba joog ah, sidaas ayaana waxaa u taagan qas xoog leh oo ah, sidii Ina Iley dhawac ama xadhig mid uun u muto [Iley ama ehelkii uu dilay mid dooro].
Arimaha ay Itobiya u soo dirtay in Iley ayaa ah Tijaabo, la doonayo in la ogaado heerka ay xaraarada Qurba joogta reer Ogadeeniya gaadhsiisan tahay, taas oo fariin u noqon doonta xukuumada Tigray, in ay sii wado dilka iyo xadhiga ay ku hayso dadweynaha Somalida Ogadeeniya una sii adeegsato Ina Iley iyo in ay aqoonsato dhibaatada uu Ina Iley u soo jiiday xukuumada Tigray isaga oo colaad xoog leh ka kasbay dadweynaha Somalida Ogadeeniya meel kasta oo ay joogaan.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayaa waxay is farayaan in ruux waliba uu tago ama telefoon u diro saldhiga Boolis ee ugu dhaw, waa hadii uusan ruuxaasi iman karin meelaha ay ku kulan san yihiin Jaaliyaadka Somalida Ogadeeniya ee loogu talo galay in ka hortagaan dambiile Ina Iley. Waxaa dadweynaha la farayaa in ay sheegaan magacyada Ehelada laga xidhay ama laga dilay tan iyo intii uu Iley yimid hogaan ku sheega Xasuuqa ee maamulka Kilalka 5aad.
Inla Iley dunuubta uu ka galay dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waxaa ka mid ah kuwan hoose iyo kuwo kale;
Bara kicin Dad
Shaqo ka Eryid Gacan qaad Dad
Xirid goob Masaajid Xirid goob waxbarasho Aflagaado Dad
10,000 25,000 100,000 5,000 3,000 1,000 7 5 3,000
Ina Iley waxaa uu burush wasakh leh marinayaa masuuliyiinta kale ee la socota, waayo shaqadooda ka sokow ma jiraan wax dhibaato ah, oo ay si gaar ah u gaysteen, wax alaale wixii magac xumo ah ee soo gaadhana waxaa u soo jiiday Ina Iley.
Xurmo kasta oo ay kala kulmi lahaayeen dadweynaha qurbo joogta ah iyo isu soo dhawaansho dhici lahaaba waxaa bi,iyey la socodka Ina Iley.
Boggaga Qaxarka Qabyaalada ee Buun Buuniya Beenta Jwxo-shiil, Jiitay Waa Hore.